January 23, 2021 - Hargeele - Wararka Somali State
Soomaaliya January 23, 2021
Ra’isulwasaaraha Britain, Boris Johnson ayaa wada hadal dhanka taleefanka la yeeshay fiidnimadii Axada madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. Boris ayaa sheegay in ay horay u sii wadi doonaan oo ay adkeyn doonaan xiriirka iyo isbaheysiga guunka ah ee ka dhaxeeya labada dal. Waa wadahalkii ugu horeeyay oo ay yeesheen labada hogaamiye tan markii la […]Sii akhriso
Cayaaraha January 23, 2021
(Spain) 24 Jan 2021. Real Madrid ayaa guul raaxo leh ka soo gaartay kooxda Deportivo Alaves oo ay booqatay, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-4, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka La Liga. Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala natsay 0-3 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Real Madrid. 15 daqiiqo […]Sii akhriso
(England) 23 Jan 2021. Manchester City ayaa kaga soo adkaatay kooxda heerka afaraad ee Cheltenham Town oo ay ku booqatay garoonkeeda Jonny-Rocks 1-3, ciyaar ka tirsaneyd kulammada wareegga afaraad ee tartanka FA Cup-ka. Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Cheltenham Town iyo Manchester City ku kala mareen barbardhac 0-0 ah. Qeybta labaad ee dheesha Sii akhriso
(Spain) 23 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Deportivo Alaves iyo Real Madrid ee horyaalka La Lig ayaa la shaaciyey Kooxda Deportivo Alaves ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Real Madrid si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan horyaalka La Liga ee dalka Spain. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo […]Sii akhriso
(Manchester) 23 Jan 2021. Xiddiga Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa si cajiib ah u difaacay qaab ciyaareedka niyadjabka leh ay Liverpool sameysay dhawaan, wuxuuna carabka ku adkeeyay in Reds aysan soo bandhigin heerar xun. Hadalka Bruno Fernandes ayaa wuxuu imaanayaa kahor kulanka ay kooxaha Manchester United iyo Liverpool ku wada ciyaarayaan tartanka FA Cup Sii akhriso
(England) 23 Jan 2021. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Cheltenham Town iyo Manchester City ee tartanka FA CUP ayaa la shaaciyey Kooxda Cheltenham Town ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Manchester City si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan tartanka FA CUP. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ee ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha […]Sii akhriso
(England) 23 Jan 2021. Kooxda Arsenal ayaa gabi ahaanba isaga hartay tartanka Fa Cup kaddib guul daro xanuun badan oo ay kala soo kulantay kooxda Southampton oo ay ku booqatay garoonkeeda St. Mary’s, ciyaar ka tirsaneyd kulammada wareegga afaraad ee FA Cup-ka, kulan ciyareedka labada koox ayaana ku soo dhamaaday 1-0. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa […]Sii akhriso
SAMAREEB-(SONNA)-Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Caddaaladda ee dowlad goboleedka Galmudug mudane Maxamuud Guure Guuleed ayaa tilmaamay in haatan talaabooyin wanaagsan ay Galmudug u qaaday xagga hagaajinta Garsoorka, ayna socdaan qorshayaal arrimahaas lagu horumarinayo. Wasiir ku-xigeenka oo warbaahinta Qaranka u sharaxay halka ay marayaan qorshaha dar-dar gelinta helitaanka Sii akhriso
MUQDISHO-(SONNA)-Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay Shirweynaha Qaran ee warbixinta qiimeynta khataraha lacag dhaqidda (Money Laundry) iyo Maalgelinta argagixisada. Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa uga mahad celiyay Xarunta Warbixinnada Maaliyadda (Financial Sii akhriso
Somali News January 23, 2021
Mogadishu, 23 January 2021 – The African Union Mission in Somalia (AMISOM) police component has launched a monthly deep clean-up exercise to thoroughly keep the environment clean. Individual Police Officers (IPOs) serving under AMISOM in Mogadishu on Friday conducted a cleanup exercise of their living quarters at the AMISOM Force headquarters. The exercise will Sii akhriso